Ungaita Sei Kuti Uve Mobile App Inogadzira | Martech Zone
Chipiri, August 28, 2012 Adam Mudiki
Ini ndaigara ndichifunga kuti nharembozha yekushandisa mabhurawuza yaizobata nharembozha maapplication - zvakanyanya senge SaaS kunyorera dzakapfuura desktop desktop. Nekudaro, nenyaya dzekuvanzika, geolocation, kutsvaira uye humwe hunyanzvi hwefoni… zvinoita sekunge mafoni ekushandisa ari pano kuti agare. Iyi infographic kubva Zvikoro.com inotsanangura kudiwa uye maitiro anogona kutorwa neti timu yako kuti ive vagadziri veapp
Gartner anofungidzira izvo kusvika 2015 nharembozha yekuvandudza mapurojekiti ichawanda mapurogiramu ekushandisa kwePC na4 kusvika 1. Vagadziri veappmobile vari kukohwa mabhenefiti e45 muzana gore pamusoro pekukura kwemabasa, maererano neBloomberg BusinessWeek. Dice.com yakashuma a 100 muzana inowedzera mukunyora basa kune vanogadzira nharembozha pakati pe2010 ne2011.
Tags: infographicmobile app vanogadziraMobile mafomuMobile Apps